Mpitsara 1 - Ny Baiboly
Mpitsara toko 1
Ny nahazoana miandalandalana ny tany Kanaana.
1Nony maty Josoe, dia nanontany an'ny Tompo ny zanak'Israely nanao hoe: Iza aminay no hananika voalohany ny Kananeana hiady aminy? 2Hoy ny navalin'ny Tompo: Jodà no hananika; indro efa natolotro eo an-tànany ny tany. 3Ary hoy Jodà tamin'i Simeona rahalahiny: Andeha hiakatra miaraka amiko hianao ho any amin'ny tany azoko tamin'ny loka, dia hiady amin'ny Kananeana isika; dia handeha miaraka aminao koa aho any amin'ny tany azonao tamin'ny loka. Dia niaraka taminy Simeona. 4Niakatra Jodà ary natolotry ny Tompo teo an-tànany ny Kananeana sy ny Ferezeana, lehilahy iray alina no resiny tao Bezeka. 5Hitany tao Bezeka Adoni-Bezeka, ka nasiany, dia resiny ny Kananeana sy ny Ferezeana. 6Nandositra Adoni-Bezeka fa nenjehin'izy ireo, koa nony azony, notapahiny ny ankiben-tànany aman-tongony. 7Dia hoy Adoni-Bezeka: Mpanjaka fitopolo notapahina ankiben-tongotra aman-tànana no nitsindroka tao ambany latabatro, ka ny nataoko ity no afototr'Andriamanitra amiko. Nentina nankany Jerosalema izy, dia maty tany.
8Namely an'i Jerosalema ny taranak'i Jodà dia afany, ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra, ary nodorany tamin'ny afo ny tanàna. 9Taorian'izany dia nidina ny taranak'i Jodà hiady amin'ny Kananeana monina amin'ny tendrombohitra, ny Negeba, ary ny Sefelà. 10Dia nandroso Jodà namely ny Kananeana nonina tany Hebrona, izay nantsoina fahiny hoe Kariata-Arbe, ary nandresy an'i Sesaia sy Ahimana ary Tolmaia. 11Avy eo dia nandroso hiady tamin'ny mponina tao Dabira, izay nantsoina fahiny hoe Kariata-Sefera. 12Ary hoy Kaleba: Homeko an'i Aksà zanako vavy ho vadiny, izay mamely ka mahafaka an'i Kariata-Sefera. 13Dia Otoniela zanak'i Keneza, zandrin'i Kaleba, no nahafaka azy, ka nomen'i Kaleba ho vadiny Aksà zanany vavy. 14Nony nandeha tany amin'i Otoniela izy, dia namporisika azy hangataka saha amin-drainy. Niala tamin'ny ampondrany razazavavy, ka hoy Kaleba taminy: Maninona hianao? 15Ary hoy ny navaliny azy: Omeo tombom-pitia aho, fa tany tsy misy rano no nametrahanao ahy, ka mba omeo loharano aho. Dia nomen'i Kaleba ny loharano ambony sy ny loharano ambany izy.
16Niara-niakatra tamin'ny taranak'i Jodà, avy any amin'ny tanànan-drofia, ny taranak'ilay Kineana zaodahin'i Moizy, nankany amin'ny efitr'i Jodà, atsimon'i Arada: ka tonga niara-nonina tamin'ny vahoaka izy.
17Dia niainga nandeha indray Jodà, nomban'i Simeona rahalahiny, ka nandresy ny Kananeana nonina tany Sefaata; nataony anatema ny tanàna, ka Horma no niantsoana azy. 18Afak'i Jodà koa Gaza mbamin'ny faritaniny, Askalona mbamin'ny faritaniny, Akorana mbamin'ny faritaniny. 19Nomba an'i Jodà Iaveh ka lasany ny tendrombohitra; tsy voaroakany anefa ny mponina amin'ny tany lemaka; fa nanan-kalesy vy ireny. 20Nomena an'i Kaleba Hebrona araka ny voalazan'i Moizy, ka noroahiny hiala tao ny zanak'i Enàka telo lahy.
21Tsy nandroaka ny Jeboseana nonina tao Jerosalema ny taranak'i Benjamina, ka niara-nonina tamin'ny zanak'i Benjamina tao Jerosalema mandrak'androany ny Jeboseana.
22Niakatra namely an'i Betela koa ny fianakavian'i Josefa ary nomba azy ireo Iaveh. 23Naniraka hisafo an'i Betela, tanàna nantsoina fahiny hoe Lozy, ny fianakavian'i Josefa. 24Hitan'ny mpiambina ity lehilahy anankiray nivoaka avy tao an-tanàna, ka hoy izy taminy: Atoroy anay izay azo idirana any an-tanàna fa hamindrànay fo hianao. 25Dia natorony azy ireo izay ho azony hidirana any an-tanàna, ka nasian'izy ireo tamin'ny lelan-tsabatra ny tanàna, fa ralehilahy sy ny mpianakaviny rehetra no nalefany handeha. 26Any amin'ny tanin'ny Heteana no nalehan-dralehilahy, dia nanorina tanàna izy, nomeny anarana hoe Lozy, mbola anarany mandrak'androany izany.
27Manase tsy nandroaka ny mponina tao Betsàna sy ny tanàna momba azy, na ny tao Tanàka sy ny tanàna momba azy, na ny mponina tao Dora sy ny tanàna momba azy, na ny mponina tao Jeblaamà sy ny tanàna momba azy, ka nahazo toky hipetraka amin'izany tany izany ny Kananeana. 28Nony efa nihanahery Israely, dia nampandoaviny hetra ny Kananeana, nefa tsy noroahiny izy ireo.
29Efraima tsy nandroaka ny Kananeana nonina tao Gazera, ka nonina teo amin'i Efraima tao Gazera ny Kananeana.
30Zabolona tsy nandroaka ny mponina tao Setrona, na ny mponina tao Naalola, ka nonina teo amin'i Zabolona ny Kananeana, fa nampandoaviny hetra.
31Asera tsy nandroaka ny mponina tao Akao, na ny mponina tao Sidona, na ny tao Ahalaba, Akaziba, Helbà, Afeka, ary Bohoba, 32ka nonina teo amin'ny Kananeana tompon-tany ny taranak'i Asera, satria tsy nandroaka azy.
33Neftalì tsy nandroaka ny mponinta tao Beti-Samesy na ny mponina tao Beti-Anata, ka nonina teo amin'ny Kananeana tompon-tany izy, nefa nandoa hetra taminy ny mponina tao Beti-Samesy sy Beti-Anata.
34Nasesiky ny Amoreana ho any amin'ny tendrombohitra ny taranak'i Dana, fa tsy avelany hidina ho amin'ny tany lemaka, 35ary nahazo toky ny Amoreana hitoetra ao Har-Haresy sy Ajalona ary Salebima fa nanampatra ny herin'ny tànany tamin'izy ireo kosa ny fianakavian'i Josefa, ka nampandoaviny hetra izy ireo. 36Ny faritanin'ny Amoreana, dia hatramin'ny fiakarana Akrabima sy Selà no ho miakatra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0674 seconds